Lahatsoratra nataon'i Unnathi Rayaprolu momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Unnathi Rayaprolu
Unnathi dia mpivarotra am-pitiavana ny hianatra zava-baovao sy hanaram-po amin'ny kolontsaina isan-karazany rehefa mandeha. Ankafiziny ny famakiana sy ny kaopy kafe amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro.
Alarobia, Aprily 7, 2021 Alarobia, Aprily 7, 2021 Unnathi Rayaprolu
Ny fanontaniana raha hanangana na hividy rindrambaiko dia adihevitra maharitra eo amin'ireo manam-pahaizana manana hevitra isan-karazany amin'ny Internet. Ny safidy hananganana rindrambaiko ao an-trano anao manokana na hividy vahaolana vonona manokana ho an'ny tsena dia mbola mitazona olona maro hanapa-kevitra. Miakatra amin'ny voninahiny feno ny tsenan'ny SaaS izay vinavinaina hahatratra USD 307.3 miliara ny haben'ny tsena amin'ny taona 2026, dia manamora kokoa ny famandrihan'ny marika ny serivisy nefa tsy mila izany.
Paikady sy fanamby mankany amin'ny marketing amin'ny fialantsasatra amin'ny vanim-potoana post-Covid
Alakamisy 19, 2020 Alakamisy 19, 2020 Unnathi Rayaprolu
Ny fotoana manokana amin'ny taona dia eo akaiky eo, ny fotoana hiandrandrantsika miala sasatra miaraka amin'ireo olon-tiantsika ary indrindra manaram-po amin'ny fividianana fialantsasatra fialantsasatra. Na dia tsy mitovy amin'ny fialantsasatra mahazatra aza, amin'ity taona ity dia miavaka noho ny fanakorontanana mihatra amin'ny COVID-19. Raha mbola eo am-piadiana ny sarotra hatrany izao tontolo izao ary miverina amin'ny laoniny ny fomban-drazana, fomban-drazana maro amin'ny fialantsasatra koa no hahatsikaritra ny fiovana ary mety ho hafa ny fahitana